Runyerekupe rwekuuya kweKeynote yaGumiguru 24, maMac matsva ari kuona | Ndinobva mac
Hatina kukanganwa Keynote yaGunyana 7 uye runyerekupe rwuri kutotanga pamusoro peKeynote nyowani yemwedzi unotevera, kunyanya iyo 24 yeOctober mairi Apple yaigona kuzopedzisira yafumura, iyo itsva MacBook Pro Retina uye ndiani anoziva chimwezve chinhu ndechekuti isu tinogona kutarisira chero chinhu.
Iyo Mac inoshanda sisitimu, iyo macOS Sierra yatove pakati pedu yakatakurwa nezvinhu zvakawanda zvitsva, saka chiri kushaika ikozvino ndechekuti Apple inotiratidza makomputa matsva ayo yaakagadzirira vateveri vayo. Tiri kutotarisira kumhando nyowani yeMacBook, zvakatonyanya kana chero chinhu chinogoneka chavangaite chave kuburitswa.
Iine Keynote yaGunyana 7, Apple yatove nayo mumugwagwa zvese izvo mushandisi zvaangade maererano nemidziyo yakaita seiyo iPhone kana maAirPod matsva. Nekudaro, kune vateveri vazhinji kuti izvo zvavari kumirira kuvandudzwa kweMacBook kuvhura kutenga kweumwe wavo. Isu parizvino tine iyo 11 uye 13-inch MacBook Air ine zvirevo zvakamonyororwa zvakagadziridzwa neApple mwedzi mishoma yapfuura, ine simba MacBook Pro Retina ine yakatarwa iyo inopfuura imwe ingade. uye dzakaonda 12-inch MacBook kunyangwe mu rose rose ruvara rwegoridhe.
Mhando dzese dzekombuta dzatakupa zita, kunze kweiyo 12-inch MacBook inotoda kutariswa zvakanaka kwete muzvinhu chete asiwo mukugadzira, uye Apple inofanirwa kuvimbisa musika nezvigadzirwa zvitsva. Ndosakakana ndingave ndichifunga nezvazvo zarura iwo maMacBook matsva muna Gumiguru 24 kuti ave nawo pamusika nenguva yeKisimusi.
Imwe yeanonyanya kuzivikanwa runyerekupe ndeye kubatanidzwa munzvimbo yemakiyi ekushanda eOLED yekubata skrini iyo yaizoita kuti iyo nzvimbo yelaptop ikwanise kuchinjiswa panguva yekuda kwezvikumbiro zvakaitwa chero nguva. Kune rimwe divi isu tingave tisati rasvika bhatani remagetsi neTouch ID tekinoroji, iyo isiri kure kutorwa nezvatakaona neiyo Nyowani bhatani pane iyo iPhone 7 uye 7 Plus.
Zvino isu tinongofanirwa kumirira vhiki dzinoverengeka kuti tizive kana iyo nyowani nyowani yekutaura ichanyatso kupembererwa kana kwete. Iwe unofunga kuti runyerekupe rwakarurama here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Runyerekupe rwekuuya kweKeynote yaGumiguru 24, maMac matsva ari kuona
Yakanga iri nguva, pane kudiwa kwekukurumidza kweMacBook Pro kuvandudzwa, tinotarisira kuti ichaitwa
Iyo Apple Magic mbeva 2 ye77 euros kuAmazon